September 17, 2021 - Babal Khabar
Sep172021 by बबाल खबरNo Comments
धेरै पुरुषले बिहे गर्ने केटी नपायपछी बहुपति प्रथामा जान सुझाव !
पुरा खबर, वास्तवमा सन् १९८० मा एक सन्तान नीति अबलम्बन गरेसँगै चीन आर्थिक रुपमा विकाशको फड्को त मार्‍यो तर लिं गअनुपातमा यसको ठूलो असर परेको छ । चीनमा रुढीवादी सोचयुक्त मानिसहरुले एउटा मात्र सन्तान जन्माउन पाइने भएसँगै छोरा मात्र जन्माउन थाले । जसका कारण त्यहाँ छोरीहरुको संख्या निकै कम भयो । त्यसैले चीनमा अहिले विवाह योग्य उमेरका धेरै युवकहरुलाई बिहे गर्नका लागि बेहुली पाउन मुस्किल परिरहेको छ । उक्त सम स्या समाधानका लागि कांग एनजी नामक चिनियाँ अर्थशास्त्रीले निकै अनौठो उपाय सुझाएका छन् । उनले तिब्बतमा सदियौँदेखि चलिआएको बहुपति प्रथालाई चीनभर अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार अहिले चीनमा लिं गानुपात निकै धेरै छ, जसका कारण कैयन् युवक हरुको बिहे हुन पाएको छैन । अवस्था यस्तो कछ कि कतिपय छिमेकी देशबाट बिहेकै लागि भनेर महिलाहरुको तस्करी चीनमा हुने गरेका घ टना पनि सार्वज
जानिराख्नुस ! केटि मान्छेका यि ५ बानीहरु फिटिक्कै मन पर्दैन केटाहरूलार्इ !
पुरा खबर, सामान्यतया छोरी मान्छेहरु सबैकुरा पर्फेक्ट चाहान्छन। अनि धेरैजना केटी मान्छेहरु आफ्नो पार्टनर माथि रोकछेक गर्न अनि आफ्नो हैकम जमाउन पाउँदा पनि खुशी हुन्छन। यसरि यदि तपाइंलाई पनि हरेक कुरामा आँफुलाई जिताउने अनि माथि राख्ने बानि छ भने त्यसलाई सुधार गरि हाल्नुहोस नत्र तपाइंको पार्टनरले तपाइँ संग दुरी बढाउन समय लाग्दैन। केहि केटि मान्छेका खराब बानीहरु हुन्छन्, जुन केटा मान्छेलाई पटक्कै मन पर्दैनन्। आउनुहोस त्यस्ता बानिहरुको बारेमा जान्नुहोस। नखरा देखाउनु : यदि तपाईं पनि बिना मतलबमा आफ्नो पार्टनर माथि अहमता देखाउनु हुन्छ भने त्यसलाई सुधार गरि हाल्नुहोस। छोरा मान्छेलाई बिना सित्तिमा नखरा देखाउने केटि मान्छे बिल्कुल मन पर्दैन। यदि तपाईंको प्रेमी तपाइंलाई कतै घुन जान या अन्य केहि कुराको लागि आग्रह गर्छ भने उसलाई चित्तबुझ्दो उत्तर दिनुहोस् न कि सन्किएर “जान्न म त, तिमि मात
केटि मान्छेहरु यस्ता केटाहरुलाइ निकै पराउछन् ?
पुरा खबर हरेक केटिलाइ फरक फरक प्रकारका केटाहरु मन पर्छन। केटीहरु केटामा यस्ता गुणहरु खोज्छन जसमा उनीहरु प्रति इमान्दारी र बफादारी मिलोस। कुनै पनि सम्बन्धमा यो जरुरि हुन्छ कि, त्यहाँ एकअर्का बीच सम्मानको साथमा एकअर्काको गुणहरु प्रति आकर्षण पनि होस्। आउनुहोस जानौ केटाहरुका यस्ता गुणका बारेमा जसले केटि मान्छेलाई आकर्षित गर्छन्। संवेदनशील हुनु : महिला र केटीहरूलाइ केटा मान्छेको संवेदनशीलता धेरै मन पर्छ। उनीहरु आफ्नो जीवन साथीमा एक संवेदनशील व्यक्ति फेला पार्न चाहन्छन। केटीहरू विश्वास गर्छन् कि सम्बेदनशील केटाहरु दिलका साफ हुन्छन् अनि असल जीवन साथि सावित हुन्छन। जो अरुको भावाना प्रति सम्बेनशील हुन्छन् ति मान्छे असल व्यक्ति हुनुका साथै एक पूर्ण जीवन साथि हुने कुरा निश्चित प्राय हुन्छ। राम्रो सेन्स अफ ह्युमर : केटिहरुलाई राम्रो सेन्स अफ ह्युमर भएको केटा मन पर्छ। किनकि यस्ता केट